Marka la eego xukunka WordPress sida nidaamka maareynta maareynta, waxaa la yaab leh sida fiiro yar ee dhab ahaan loogu bixiyo barxadda aasaasiga ah ee is-beddelka dhabta ah. Ku dhowaad daabicitaan kasta - hadey tahay ganacsi ama baloog shaqsiyeed - waxay u egtahay inay u beddeleyso martida macaamiil ama rajooyin. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii ma jiraan waxyaabo ka mid ah barxadda aasaasiga ah ee la qabsan kara hawshan. Beddelaadda Pro waa boggag WordPress ah oo dhammaystiran oo bixiya tafatiraha jiita & tifaftiraha, jawaabta moobiilka
Arbacada, December 16, 2015 Arbacada, December 23, 2020 Douglas Karr
Waxaa jira duufaan ka socota jihada warshadaha otomaatiga suuqgeynta. Caqabadaha hortaagan gelitaanka barnaamijyada cusub ayaa hoos u sii dhacaya marba marka ka dambeysa, meheradaha qaan gaarka ah waxaa liqaya meheradaha suuqgeynta shirkadaha, kuwa bartamaha ku harayna waxay ku jiraan xoogaa bado qallafsan. Ama way baryayaan inay ku tiirsanaan karaan macaamiishooda-saldhig si ay ugu ekaadaan soo jiidasho iibsade, ama waxay u baahan yihiin inay hoos u dhigaan qiimahooda - wax badan. Hal khalkhal ku keenay warshadaha taas
Sahan: Sidee Isu Barbardhigayaa Wax Soo Saarkaaga Mawduucu?
Talaado, Juun 16, 2015 Talaado, Juun 16, 2015 Douglas Karr
Rundown waxay bilaabaysaa sahan cilmibaaris suuqeed socda oo ku saabsan hababka wax soo saarka waxyaabaha. In kasta oo ay jiraan wax badan oo cilmi-baaris ah oo la heli karo oo ku saabsan suuq-geynta guud ahaan, waxaa jira macluumaad aad u yar oo gaar ah oo loogu talagalay xirfadleyda mawduucyada si ay ugu adeegsadaan aasaaska habka wax-soo-saarka dhabta ah, geeddi-socodka, ilaha shaqaalaha, doorarka, iyo masuuliyadaha, iyo tikniyoolajiyadda. Rundown waxay sii deyn doontaa casriyeyn muhiim ah oo ku saabsan xogtaan muhiimka ah sanadka oo dhan. Rundown waxay u sameysay sahan gaaban aqoonyahanada ka kooban